Frequently asked questions about Covid-19 - isiXhosa | Covid-19 Response
Frequently asked questions about Covid-19 - isiXhosa
Yintoni intsholongwane icorona (coronavirus)?
Iintsholongwane ezibizwa ukuba yicorona liqela elininzi leentsholongwane ezixhaphake kwizilwanyana. Ezi ntsholongwane zibangela ukuba abantu bagule, babe neengxakana ezingephi zokuphefumla ezichaphazela iimpumlo,umlomo nomqala, iimpawu ezifana nezefiva. Intsholongwane entsha ebizwa ngokuba yi COVID-19 ibonwe eChina yaze yanyaniswa nokuqhambuka kwenyumoniya.
ICOVID-19 sisifo esitsha esosulelayo esibangelwa yintsholongwane eqhambuke kutsha nje ekuthiwa yicorona. Le ntsolongwane intsha nesi sifo besingaziwa ngaphambi kokuba siqhambuke eWuhan, eChina, ngoDisemba 2019.
Zithini iimpawu zeCOVID-19?
Isifo esibuthathaka kakhulu sokugula ngokuphefumla
ukukhohlela – okudla ngokoma
i-Myalgia (izihlunu ezibuhlungu/ umzimba obuhlungu)
ukuphulukana nokunambitheka kunye /okanye ukuphulukana nevumba kunokubakho kubantu abathile
Qwalasela umqala obuhlungu kunye nempumlo enkcenkcezayo zithande ukuba ziqheleke kwi-Covid-19 kunakwimikhuhlane okanye kolunye usulelo oluphezulu ngendlela yokuphefumla.
Isasazeka njani leCOVID-19?
ICOVID-19 isasazeka ikakhulu ngamaqabaza ataka xa umntu onayo ekhohlela okanye ethimla. Ukusondelelana okufana nokubamba okanye ukuxhawulana izandla.
Ukubamba into okanye umphezulu obudibene nalentsholongwane, emva koko ubambe umlomo, impumlo okanye amehlo ungakhange uzihlambe izandla zakho.
Kuba le ntsholongwane isasazeka ngomoya kubalulekile ukuba umgama ophakathi kwakho nomnye umntu ubeyimitha 1-2 (amanyawo ama-3-6) umgama phakathi kwakho nomntu ogulayo.
Lithini ixesha lokufukama kweCOVID-19 kwaye ithatha ixesha elingakanani?
“Ixesha lokufukama” lithetha ukuba lixesha phakathi kokufumana intsholongwane nokuqalisa ukuba neempawu zesifo. Uqikelolo lweli xesha lokufukama kweCOVID-19 ukusuka ku-1-14 iintsuku, ikakhulu phaya kwiintsuku ezintlanu.
Ndithathwa nini ukuba ndine-Covid-19?
Ukuba ukrokrela ukuba unokuba unayo iCovid-19, thatha ke uvavanyo lokuzivavanya ngokwakho ukubona iprofayile yomngcipheko.
Mandenze ntoni xa ndirhanela ukuba ndineCovid-19?
Ukuba ukrokrele ukuba uneCovid-19 nceda UNGAPHUMI ENDLWINI uye kuzivavanya kuba uya kuba uzibeka emngciphekweni wokusulelwa kwaye usulele abanye abantu.
Endaweni yoko thatha le self – assessment yokuzivavanya ukuze uqonde ukuba usemngciphekweni kangakanani na.
Ukuba iziphumo zovavanyo lweself-assesment zibonisa ukuba ungasemngciphekweni wokuba neCovid-19, nceda uqhagamshelane neengcali kwezempilo ngokukhawuleza.
Kubalulekile ukuba ufumane uncedo olukhawulezileyo nelikukhusela ukuba ungayinwenwiseli kwabanye abantu iCovid-19:
Ukuba unako ukufumana uncedo kwizibhedlele zabucala nceda utsalele ugqirha wakho/ neziko lezempilo likarhulumente elikufutshane okanye utsalele iziko iNICD Hotline kule nombolo 0800 029 999 okanye i Provincial Hotline engu021 928 4102. Ucacise ngeempawu nalapho ukhe wandwendwela khona okanye nabani na okhe wasondelelana naye.
Ukuba usebenzisa iziko lezempilo likarhulumente nceda utsalele kwiziko elo okanye inombolo yakwaNICD u0800 029999 okanye iProvincial Hotline engu021 928 4102. Uya kufumana amacebiso okuba ungenza njani. Ukuba awukwazi ukutsala umnxeba, yiya kwiziko lezempilo elikufutshane.
Phambi kokuba ungene kwiziko lezempilo lumkisa abasebenzi ukuba unoloyiko lokuba unganayi iCovid-19. Lindela ukuba uya kunikwa imaskhi yokugquma iimpumlo nomlomo. Uya kucelwa ukuba ulinde wedwa kude nezinye izigulane ude ufumane uncedo. Ukuba uyaziva ukuba ufumana ubunzima uyaminxana/uphefumla nzima, funa uncedo ngokukhawuleza. Ukuba kuyenzeka, tsalela iziko lakho lezempilo ubazise ukuba usendleleni.
Ndikuthintela njani ukosuleleka, okanye ukusasaza iCovid-19?
Ungawanciphisa amathuba akho okusuleleka okanye ukusasaza i-Covid-19 ngokuthatha amanyathelo afanelekileyo okhuseleko:
Okona kubaluleke kakhulu, ukuba unako, hlala ekhaya. Ziphephe iintlangano
Nxiba isifonyo ngalo lonke ilixa kufuneka uphumile kwikhaya lakho.
Rhoqo hlamba izandla zakho ngokugqibeleleyo ngesepha namanzi okanye ucoce izandla zakho ngomrabho wezandla osekwe kwi-alkoholi isithuba semizuzwana engama-20. Hlamba izandla rhoqo, ngakumbi ngaphambi kokuphatha ukutya / emva kokusebenzisa indlu yangasese okanye ukukhohlela/ ukuthimla.
Gquma ukukhohlela kwakho okanye ukuthimla ekugobeni kwengqiniba okanye ngephepha eliyacuyacu, xa sele uyisebenzisile yilahle uhlambe izandla zakho.
Kuphephe ukuchukumisa amehlo akho, impumlo kunye nomlomo ngezandla ezingahlanjwanga.
Kuphephe ukusondelelana nabantu abagulayo.
Khawusixelele ukuba aba bafunyaniswe benayo iCovid-19 bahlala phi?
Kubalulekile ukuba siyihloniphe imfihlo yesigulane kwakunye nokhuseleko lwabo, ngoko ke siya kumana sikhupha amanani osuleleko ngokwezithili hayi ngokwedolophu okanye ingingqi.
Ncedani nikhumbule ukuba ngeli xesha lobunzima kufanele ukuba sibe nobuntu nobubele kwabanye abantu, Ingakumbi kwabo bathe bosuleleka yiCovid-19 yaye oku kungabakhathaza yaye lixesha elinzima kakhulu kubo neentsapho zabo.
Eyona nto onokuyenza ukuzikhusela wena nabanye abantu ukuze ungosuleleki kukuhlala ekhaya.
Ndivavanyelwa njani iCovid-19, kwaye ixabisa malini?
Ukuba ukrokrela ukuba uneCovid-19 nceda UNGALISHIYI ikhaya lakho ukuya kuvavanywa njengoko usesichengeni sokosuleleka, okanye ukosulela abanye.
Endaweni yoko thatha ke uvavanyo lokuzivavanya ngokwakho ukubona iprofayile yomngcipheko.
Ukuba iziphumo zovavanyo lokuzivavanya ngokwakho zibonisa ukuba ungasesichengeni seCovid-19 nceda ke unxibelelane nabezempilo ngoko nangoko.
I-Metro nasemaPhandleni zikwizigaba ezibini ezahlukeneyo zobhubhane, yiyo lonto zilandela iindlela ezahlukeneyo zokuvavanya. Nangona izindlela ezimbini ezahlukileyo, zombini zijolise ekusindiseni ubomi babantu ababuthathaka.
Bonke abantu abangena kwiziko lezempilo baya kuvavanywa (babuzwe imibuzo) kodwa kuphela abo baneempawu kwaye bewela kwelinye kula macandelo baya kuvavanywa.
Ungeniswe esibhedlele kwaye uneempawu zekhoronavayirasi
Ungaphezulu kweminyaka engama-55 kwaye uneempawu zekhoronavayirasi
Ungowuphi na ubudala, uneempawu zekhoronavayirasi kwaye unayo enye nangaphezulu yezi meko:
- Isifo seswekile, uxinzelelo lwegazi okanye isifo sentliziyo,
- unyango loMhlaza,
- unyango lwesifo sePhepha,
- unyango lwesandulela sikagawulayo ngokungabambeleli kakuhle kwii-ARV,
- unyango lwesifo esingapheliyo semiphunga (umz. umbefu, i-emphysema, isifo semibhobho yemiphunga esinganyangekiyo)
Uhlala kwikhaya lokukhathalela okanye ikhaya labadala kwaye uneempawu zekhoronavayirasi
Ungumsebenzi wezempilo kwaye uneempawu zekhoronavayirasi
Ukuhlolwa koluntu ekuhlaleni kunye nokuvavanywa kuqhubeka, kukwakhona ukugxila okwandileyo ekuhlolweni kwabasebenzi ababalulekileyo kunye neendawo zomsebenzi. Loo malungu oluntu abonakalisa iimpawu aya kuvavanywa ngelixa abo basondeleyo kubo baya kucelwa ukuba bazivalele bodwa kwaye bazijonge ukuba banazo iimpawu baya kuvavanywa.
Nje ukuba umntu afunyaniswe ene-Covid -19, uneempawu ezibuthathaka kuphela, kwaye ebekhe wabekelwa bucala kangangeentsuku ezili-10, akukho luvavanyo lulandelayo ludingekayo. Umntu ke lowo uthathwa njengophilileyo, angabuyela emsebenzini.
Kubalulekile ukuba ufune ukhathalelo ngendlela ekuthintela ekusasazeni i-Covid-19 kwabanye:
Ukuba uyafikelela kwinkathalo yezempilo yabucala tsalela ugqirha wakho / indawo yezempilo yengingqi okanye inombolo yomnxeba ye-NICD ku-0800 029 999 okanye kule Nombolo yePhondo 021 928 4102. Chaza iimpawu zakho kunye nendawo oye wahamba kuyo okanye umntu obusondelelene naye.
Ukuba uyafikelela kwinkathalo yezempilo yabucala tsalela ugqirha wakho / indawo yezempilo yengingqi okanye inombolo yomnxeba ye-NICD ku-0800 029 999 okanye kule Nombolo yePhondo 021 928 4102. Uya kufumana ingcebiso malunga nento ekufuneka uyenzile. Ukuba awukwazi ukwenza umnxeba, yiya kwiziko lakho.
Phambi kokungena kwiziko yazisa abasebenzi ukuba uneCovid-19. Lindela ukucelwa ukuba unxibe isifonyo sobuso. Uya kucelwa ukuba ulinde ngokusecaleni kwezinye izigulana de ube unokuncedwa ngumsebenzi wezempilo.
Ukuba uye waphefumla nzima, funa inkathalelo ngokungxamisekileyo. Ukuba kunokwenzeka, tsalela umnxeba kwiziko lakho lezempilo ukuze ubazise ukuba usendleleni.
Ngaba ndingala ukuvavanyelwa iCovid-19, okanye ndivalelwe ndedwa okanye ndibekelwe bucala?
Ukuba uvavanywe ukuba unayo iCovid-19, nokuba kukwimeko yezonyango okanye njengechiza elenzelwe umntu, okanye ukuba ukrokrelwe ukuba uneCovid-19, okanye ke uthe wahlangana nomntu oneCovid-19, akukho semthethweni ukwala imvume koku kulandelayo:
uvavanyo lwezonyango, kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekuthatheni isampulu yomzimba ngumntu ogunyaziswe ngumthetho ukuba enze oko;
ukwamkelwa kwiziko lezempilo okanye indawo obekelwa bucalwa kuyo okanye ovalelwa wedwa kuyo; okanye
ukungeniswa komntu kunyanzelo lokuzikhusela kwisifo, kunyango, ukubekelwa bucala okanye ukuvalelwa wedwa, okanye ukubekelwa bucala ukuthintela ugqithiselo. Ukuba ukhetha ukuzibekela bucala okanye ukuzivalela wedwa ekhaya, uya kulandelwa rhoqo ukuqinisekisa ukuba awuphumi kwindlu yakho.
Ukuba awuthobeli myalelo okanye umyalelo wegosa lonyanzeliso, uya kubekelwa bucala okanye uvalelwe wedwa kangangexesha elingangeyure ezingama-48, njengoko imeko inokuba njalo, ngokuxhomekeka kwisigunyaziso esikhutshwe yiNkundla efanelekileyo, ngokwesicelo segosa elinyanzelisa uvavanyo lonyango.
Ingaba ungasixelela apho azakubakho amaziko okubekelwa bucala nokuvalelwa wedwa eCovid-19?
Oku kuya kwaziswa kuwe liqela lolawulo lwamatyala kwindawo yakho njengoko kwenziwa onke amalinge okukwamkela kwiziko elikufutshane nalapho uhlala khona.
Ngubani osengxakini yokugula kakhulu?
Ngeli xesha sisafunda malunga nokuba iCOVID-19 ibachaphazela njani abanye abantu, abantu abadala, nabantu abanemeko zabo zokugula (ezifana nesifo semiphunga, isifo sentliziyo, umhlaza okanye isifo seswekile) abo ke bantu bangathi bagule kakhulu kunabanye abangenazo ezi zifo bona.
Ingaba likhona ichiza, iyeza okanye unyango lweCovid-19?
Ayikabikho. Ukuza kuthi ga ngoku, akukabikho thintela, yaye akukabikho nachiza lithile elisisilwi-zintsholongwane ukuthintela okanye ukulwa iCovid-19.
Ukuba uguliswa yiCovid-19, ungazithomalalisa iimpawu onazo zale ntsholongwane ngokusela iyeza elifana neparacetamol. Kukwabalulekile ukuba uhlale ngokusela (amanzi).
Ukuba imeko yakho iya isiba mandundu, tsalela ihotline yephondo ukufumana olunye uncedo nangakumbi: 021 928 4102.
Ingaba ii-antibiotics ziyasebenza ukuthintela okanye ukunyanga iCOVID-19?
Hayi. II-Antibiotics azisebenzi kule ntsholongwane, zisebenza kuphela kwizigulo ezenziwe yibhakteriya. ICOVID-19 ibangelwa yintsholongwane, ngoko ke ii-antibiotics azisebenzi. Ii-Antibiotics kufuneka zingasetyenziswa njengendlela yokuthintela okanye ukunyanga iCOVID-19. Kufuneka zisetyenziswa ngendlela oxelelwe ngayo ngugqirha ukunyanga izigulo ezibangelwa yibakteriya.
Ngaba ndingakwazi ukufikelela kumayeza am ezigulo ezinganyangekiyo xa ndivaleleke ngendlu?
Ngaphambi kokuvaleleka ngendlu izigulana ezizinzileyo ezikumayeza ezigulo ezinganyangekiyo zazinikwa ulwabiwo lwenyanga ezimbini apho kunokwenzeka kunye nezigqibo zokudibana ezilandelelwayo.
Enye indlela yokuzothatha iipasile zamayeza iza kuchongwa zize izigulana zaziswe.
Abasebenzi beMpilo yoLuntu baya kuba nakho ukuhambisa ezi pasile zamayeza kumakhaya abaguli abagula zizifo ezinganyangekiyo.
Izigulana zesifo seswekile ziyakhuthazwa ukuba zihlale ekhaya kwaye zifikelele kwisikhululo se-Pocket Clinic WhatsApp ukuqinisekisa ukuba amayeza abo aziswa emakhayeni abo. Izigulana ziyakhuthazwa ukuba zithumele u-'Hi' ku-087 240 6122 ukuqinisekisa ukuba siyakwazi ukuzisa amayeza abo ekhaya..
Ingaba kufuneka ndinxibe isifonyo/imaskhi ukuzikhusela kwi Covid-19?
Ewe, kufuneka unxibe imaskhi yelaphu okanye eyenziwe ekhaya ngelaphu ethi yogqume impumlo nomlomo xa usendaweni enabantu, okanye neyiphi na into eyogquma umlomo nempumlo evumelekileyo.
Awunakuvunyelwa ukuba ukhwele isithuthi sika wonke wonke, okanye awunakungena kwisakhiwo, kwiziko okanye kwindawo esisakhiwo xa unganxibanga maskhi egquma umlomo nempumlo okanye i maskhi eyenziwe ekhaya.
Umqeshi wakho makanike imaskhi wonke umsebenzi onokuthi ahlangane noluntu njengomsebenzi wakhe ukuze azikhusele ngokugquma impumlo nomlomo, okanye imaskhi eyenziwe ekhaya eyogquma umlomo nempumlo.
IMaskhi zobuso ezilahlwayo zingasetyenziswa kube kanye zilahlwe.
Eyona ndlela iyiyo yokuzikhusela nokukhusela abanye kwi Covid-19 kukuhlala ekhaya, ukuhlamba izandla zakho rhoqo, ugqume umlomo wakho ngengqiniba okanye ithishu xa ukhohlela okanye uthimla kwaye ugcine umgama ongange 1-2 mitha phakathi kwakho nabanye abantu abakhohlelayo nabathimlayo.
Ndihlala ematyotyombeni yaye sisebenzisa itap kunye nezindlu zangasese zikawonke wonke- yeyiphi indlela engcono yokukhusela ukosuleleka yi Covid-19?
Ukuba nisebenzisa iitepu enye nezindlu zanangese kwiindawo zamatyotyombe, nanga amacebiso ongawasebenzisa okunqanda ukosuleleka nokunwwenwa kwe Covid-19:
Ungayibambi itap, indlu yangasese okanye ucango lwayo ngezandla ezingakhuselwanga
Bamba itap, necango lendlu yangasese okanye isiciko sendlu yangasese ngephepha
Ungasebenzisa unyawo okanye igxalaba/ingqiniba ukuvula indlu yangasese nokuphakamisa isiciko sethobhi
Yima qelele kangangemitsi emithandandathu kwabanye abantu xa ulinde emigceni yokungena endlini yangasese nasezitepini
Emva kokuba usebenzise indlu yangasese okanye itap ungabubambi ubuso bakho, amehlo, impumlo okanye umlomo ude uhlambe izandla ngesepha namanzi.
Coca indlu yangasese okanye i tap ngelitha yamanzi axutywe namatispuni amane (4) e-Jik bleach ( wugcine kude ebantwaneni lomxube).
Ndiyakwazi ukuncancisa ukuba ndosulelwe yi Covid-19?
Okwangoku akukho bungqina ngokweengcali ezibonisa ukuba lentsholongwane inganikezeleka ngokuncancisa.
Ukunikezelana kunganwenwela emntwaneni ngendlela efanayo xa umntu ethe wasondela kuwe. Ukunceda ukuncancisa kususa yonke imingcipheko yokunikezela ngentsholongwane ngokuncancisa ibele okanye ngokusondelelana nomntwana wakho.
Ukuba unqwenela ukuncancisa ibele, nceda uthathe amanyathelo okucutha ukunwenwa kwe Covid-19 emntwaneni ngokuthi:
Uhlambe izandla phambi kokuphatha umntwana, impompo yebele okanye iibhotile zomntwana.
Zama ukungakhohleli okanye uthimlela emntwaneni ngelixesha umncancisa ibele
Coca zonke impompo zebele njengoko zichaziwe apho zenziwa khona ngalo lonke ixesha
Zama ukucela omnye umntu ophilileyo ukuba ancancise umntwana wakho ubisi olusengiweyo.
Ukuba uncancisa ngobisi oluthengiweyo okanye olusengwe ebeleni, zihlambisise izixhobo zokuncancisa ngokucocekileyo phambi kokuba uzisebenzise. Akufuneki ubolekise ngeebhotile okanye iimpompo zebele komnye umntu.
Ingaba intsholongwane ithatha ixesha elingakanani kwimiphezulu?
Akuqinisekwanga ukuba intsholongwaneebangela iCovid-19 ithatha ixesha elingakanani ukuphila kwimiphezulu yezinto, kodwa ke kukhangeleka ngathi yenza njengezinye iintsholongwane zecorona (coronaviruses) (kuquka iinkcukacha zokuqala ezimalunga neCOVID-19 virus) zingancamathela kwimiphezulu yezinto iiyure ezimbalwa okanye ukuya kutsho kwiintsuku eziliqela.
Oku kungohluka ngokweemeko ezahlukeneyo. (umz. Uhlobo lomphezulu,amaqondo obushushu okanye ukufuma kwendawo leyo ).Ukuba ucinga umphezulu wendawo uchaphazelekile kule ntsholongwane, wucoce ngesibulali zintsholongwane esiqhelekileyo uzikhusele wena kunye nabanye abantu. Coca izandla zakho nge- alcohol-based yokuhlikihla izandla okanye zihlambe ngamanzi anesepha. Ungawaphathi amehlo akho, umlomo okanye impumlo ngezandla ezingahlanjwanga.
Yeyiphi eyona ndlela iyiyo nekhuselekileyo yokulahla igloves zezandla kunye nemaskhi zokukhusela ubuso ukucutha ukufikeleleka kwazo ebantwini abanokuzikhupha emgqomeni?
Ezibhedlele naseziklinikhi, ziba yinxalenye yenkunkuma yomngcipheko kwezempilo (ukulahlwa kwezinto zonyango) eye ithathwe ngabo baqeshelwe oko.
Emakhaya okanye emsebenzini, ungazilahla ezi glavu nezi maskhi kumgqomo wakho wenkunkuma, kodwa ke ungazisongela ephepheni phambi kokuba uzifake ebhegini/emgqomeni.
Ukuba ukhe wasondela emntwini osulelekileyo, kwakufuneka ukuba inkunkuma yakho ifakwe kwibhegi ezimbini phambi kokuba ifakwe emgqomeni ibekwe elangeni kangangeentsuku ezintathu ukuya kwezintlanu phambi kokuba ifakwe emgqomeni oya kuthi uthathwe nguMasipala.
Ingaba ntshukumo zini azenzayo uRhulumente weNtshona Koloni ukunqanda ukunwenwa kweCovid-19 kwimimandla yamatyotyombe?
Ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto kuzwelonke sicela wonke umntu eNtshona Koloni ukuba ahlale ekhaya.
Zonke iimeko eziqinisekileyo ezithi zichazwe, ukusuka eKhayelitsha naseMitchell’s Plain ukuya eMossel Bay – sizithathela ingqalelelo yaye zibaluleke kakhulu kuthi.
Amaqela ethu asebenza yo ajongana nayo nayiphi na into ethi ivele kwindawo zethu zamatyotyombe ngokukhawuleza nangokubaluleka ezikufaneleyo, yaye enza ulandelelwano ngemnkcukacha zabo ukuze baqinisekise ukuba bahlaliswa bodwa abo bosulelekileyo.
Wenzani uRhulumente ngokubhekiselele ekulandeleleni iinkcukacha?
Iqela elilandelela iinkcukacha leSebe lezeMpilo lenyuse izinga lokuqinisekisa ukuba iinkcukacha zabo bafunyenwe benayo lentsholongwane bayakhethwa baze basuswe ebantwini ngokukhawuleza. Oku kuhambelana nemiyalelo yesikhokelo esivela kwi World Health Organization ethi onke amazwe mawakubeke phambili ukuvavanywa kwabantu kunye nenzame zokwenza ulandelelwano.
Wenza ntoni uRhulumente weNtshona Koloni ukunqanda ukunwenwa kwe Covid-19 kwizithuthi zika wonke - wonke?
Sidibene nabalawuli kunye nabaqhubi bezithuthi zika wonke-wonke abafana no PRASA, Golden Arrow Bus Service, Isixeko saseKapa kwakunye neKhansile kaZwelonke yooNotaxi boMzantsi Afrika (SANTACO), yaye bayibekile imithetho namanyathelo aphambili yokunqanda ukunwewenwa kwe Covid-19 kwizithuthi zikawonke- wonke.
Sibanikile iingcebiso ngococeko nemiyalelo yokuhlamba, yaye baqalise ngamaphulo okufundisa abakhweli nabaqhubi betaxi, ngokunqanda ukunwenwa kwe Covid-19.
Funda ngokubanzi malunga namanyathelo athathwe sisiXeko saseKapa okuzama ukunqanda ukunwenwa kwe Covid-19 kwizithuthi zika wonke- wonke.
Ngawaphi amanye amanyathelo amiselelweyo ukukhusela abasebenzi bezempilo kwiCovid -19?
Siyababongoza bonke abasebenzi ukuba bathobele imimiselo ephambili yokhuseleko (ukuhlamba izandla, ukuvula umgama phakathi komntu nomntu, indlela engummiselo wempilo xa umntu ekhohlela) nokusebenzisa izixhobo zokuzikhusela ngendlela efanelekileyo. Siqulunqe isikhokelo somgaqo-nkqubo malunga noku, eso sikhokelo sihambelana nemimiselo emalunga neenkalo ezahlukeneyo zokusebenza.
Funda izikhokelo zethu ezimalunga nabasebenzi .
Ungasixelela ukuba zizakubaphi iindawo/amaziko okugcina abo bahlaliswa bodwa beCovid-19?
Asikabinawo okwangoku kuba sisalungisa amaziko lawo.
Ndizibhekelisa njani kwababanye abantu?
Amanyathelo alandelwayo abalwa njengomgama aquka oku:
Musa ukusondela kumntu obonakalisa iimpawu ze-Covid-19. Ezi mpawu ziquka amaqondo obushushu aphezulu kunye nokukhohlela okungapheliyo
Musa ukusebenzisa izithuthi zikawonkewonke kungekho mfuneko yaloo nto
Ukusebenzela ekhaya, xa kukwazeka. Umqeshi wakho kufuneka akuxhase ukuba wenze oko. Nceda ujonge ku employer ufumane into eza kukhokela ufumane iinkcukacha ezithe vetshe
Musa ukuzibandakanya neendibano zabantu abaninzi kwanezabambalwa esidlangalaleni, siqaphele ukuba iirestyurenti, iindawo zokuzipholela neendawo ezifana nezo okwangoku zivaliwe njengoko esi sifo sisasazeka lula kwiindawo ezivalekileyo apho abantu bahlangene khona
Musa ukuzibandakanya neendibano kunye neetshomi kunye nosapho lwakho ngeli xesha. Ungamane ubakhangela ngokubafonela, ubabhalele kwi-intanethi nakwisocial media
Ukusebenzisa ifowuni okanye nezinye iindlela zoqhagamshelwano ezifana nomqhafazo (sms)ukuqhagamshelana nogqirha wakho okanye ezinye iinkonzo ezibalulekileyo. Wonke umntu kufuneka azame ukulandela imiqathango ebekiweyo kangangoko benakho.